Mon, Jul 13, 2020 at 10:41pm
बुधबार, ११ आषाढ २०७६,	– एकराज पाठक.	2.07K
ल्हासा, तिब्बत, ११ असार ।
सन् १९७८ तिर देङ सियाओ पिङले खुला चीन नीति अख्तियार गरेका थिए । यो नीतिले चीनलाई बाह्य संसारसँग खुला ग¥यो । खासगरी चीनमा लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई गरिएको आह्वान थियो त्यो ।
खुला तिब्बत अवधारणामा बहस :
गत हप्ता ल्हासामा सम्पन्न तिब्बत विकास मञ्च सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट सहभागी फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सेंघाई लि तिब्बतको परम्परा र संस्कृति धेरै धनी छ, यसबाट कुनै देश या क्षेत्रभन्दा पनि संसार नै लाभाान्वित हुन सक्छ भन्नुहुन्छ ।
तिब्बतमा चीन विकास !
अहिलेको तिब्बतमा चीन विकासको खास नमूना देख्न सकिन्छ, त्यसैले खुला तिब्बतको चिनियाँ बहस सार्थक रहेको उहाँ ठान्नुहुन्छ । संस्कृत लगायतका विश्वका पुराना भाषाहरुको अध्ययन गरिरहनुभएका लिले तिब्बतमा चीन सरकारले तिब्बती भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा गरेका कामको सराहना गर्नुभयो ।
तिब्बतको इतिहास पढेर र तिब्बतको पुरानो अवधारणामै रहेर अहिलेको तिब्बतको वास्तविकता बुझ्न नसकिने चीनमा रहेर प्राध्यापन गरिरहनुभएका नेपाली प्राध्यापक डा.राजिवकुमार झा बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “तिब्बत पश्चिमा संसारले हिजो गरेको कल्पनाजस्तो अहिले छैन । यसलाई बुझ्न हिजोको मानसिकताले काम पनि गर्दैन, स्थलगत अध्ययन नै गर्नुपर्छ ।”
तिब्बतको विकास नेपालका लागि पनि खुशीको कुरा हो भन्ने मान्यता उहाँ राख्नुहुन्छ ।
नेपाललाई फाइदा :
चिनियाँ शहरहरुमध्ये तिब्बत नेपालसँग भौगोलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि धेरै नजीक रहेकाले तिब्बतको विकासले नेपाललाई फाइदा पुग्ने उहाँको तर्क छ । सो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल ‘एक चीन नीति’मा स्पष्ट रहेको र पछिल्लो समयमा नेपाल र चीन सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो । समृद्ध छिमेकीबाट लाभान्वित हुन नेपालले पनि सिक्नु पर्ने र त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहूँच थिएन । कम्तीमा ९५ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित थिए । त्यहाँका जमिन्दार तथा सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र शिक्षाको अवसर थियो । तर अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ । गत वर्षको एक तथ्याङ्क भन्छ – यहाँका बालबालिकामा विद्यालय भर्ना दर ९९.५ प्रतिशत छ । यो प्राथमिक तहको शिक्षामा हो । त्यस समयको सबै शिक्षा प्रणालीलाई भत्काएर नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षालाई सहज र पहूँचयोग्य बनाइएको छ ।
शिक्षा निति :
विद्यालयसम्मको शिक्षा लगभग निःशुल्क छ । चिनियाँ र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त तिब्बती भाषामा पनि यहाँ शिक्षा दिइन्छ । यसमा पनि तिब्बती भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा उनीहरुको विशेष जोड देखिन्छ ।
विकासको कुरा गर्दा सन् १९८० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा करीब एक हजार आयोजना सञ्चालन भए । चीनको केन्द्र सरकारका यी आयोजनामा खर्बौ चिनियाँ युआन लगानी भएको तथ्याङ्क भेटिन्छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१८ मा १४७.७६३ चिनियाँ युआन रहेको छ । यो सन् १९५९ को तुलनामा करीब २०० गुणा बढी हो ।